ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'Le Petit Diable'. Ibali lethu le-Antoine Griezmann yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezaziwa malunga naye.
Ewe, wonk 'ubani uyazi malunga nokudlala kwakhe okwenza amakhono kodwa bambalwa abalandeli bajonga udaba luka-Antoine Griezmann ibali elibandakanya ukufunda okuningi ngabazali bakhe, umzalwana, udade kunye nendlela yokuphila njl. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, vumela uqale.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Obomi bakwangoko
UAntoine Griezmann Ukhetho lwabantwana
UAntoine Griezmann wazalwa kwi 21 Ngo-Matshi 1991 eMâcon, eFransi ngu-Alain Griezmann (uyise) no-Isabelle Griezmann (unina).
Wazalelwa ootyebileyo ongobupolitika eFransi. Uyise wayeyilungu lekhansela langaphambili elinesityebi ngokwaneleyo ukufumana u-Antoine omncinane into ayifunayo njengomntwana. Umama wakhe, kodwa, wayengumcocisi wesibhedlele.
Iqhinga lakhe lebhola liza ngokuvela kwisiPutukezi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba igazi lePhuthukezi liyaphumelela emithanjeni kaAntoine Griezmann. Umkhulu ka-Antoine u-Amaro Lopes wayengumkhuseli oyintloko okhuselekileyo owayekade emele iqela lePutukezi.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Qala kwibhola
Ukuba nomkhulu wakhe owayengumdlali webhola wamenza ukuba abe nomdla kulo mdlalo. Nangona kunjalo, umdlalo wokugqibela u-Antoine weza xa ebona izinto ezithandwa nguZinedine Zidane kunye Thierry Henry ngexesha leNdebe yeHlabathi ye-1998. Oku kumphefumlela kwiminyaka yobudala ukuba angene kwibhola kwaye emva koko, iphupha lakhe liphinda liphindwe xa uZidane kunye Henry wenza nge shirt French.
I-Antoine Griezmann Ibali labantwana
UGriezmann owayengummeli weLyon njengengane yisoloko ikwazi ukukwazi. Ukuzalelwa kweekhilomitha ezili-70 ukusuka eLyon eMâcon, kwakuthetha amathuba omsebenzi wakhe omncinci. Wayekhe wahamba waya kuba nezilingo kwiklabhu yenkwenkwe yaseLyon njengomntwana, kodwa wayebhekwa njengobuthakathaka ukujoyina i-academy yakhe kwaye wayenqaba.
UGriezmann wabuyela ekhaya lakhe waza waqala umdlalo wakhe wokudlala iklabhu yasekuhlaleni u-UF Mâcon. Wamukelwa khona ngenxa yempembelelo ka-kayise yezopolitiko. Ngethuba apho, waphinde waqala ukuvavanya ngamanye amacandelo eengcali ukwenzela ukuba athole indawo kwiziko lezakhono zabo zolutsha.
Kwakhona walahlwa ngenxa yokuba iiklabhu zazibuza ubungakanani bakhe nobubanzi obukhulu. UAntoine Griezmann wayelo xesha elincinane kakhulu-ubudala. Wena wayenomdla obalaseleyo kunye nombono webhola lebhola. Oku kungenxa yokuba wayeyinkwenkwe.
Ekugqibeleni, ukuphumelela kwafika kumfana omncinci. Kwi-2005, ngelixa ekulingwa noMontpellier, uGriezmann wadlala kumdlalo onobusene ne-youth academy yaseParis Saint-Germain eParis, kwaye yathintela amanqaku amaninzi eeklabhu. Ukukhangela kweqela leSpeyin ku-Real Sociedad, oya kulo mcimbi. Baye banomdla ngakumbi kuye ngokungafani nabanye abaScouts. Ukulandela umdlalo oko wathola i-trophy, izikhulu zeglabhu zanikela uGriezmann isilingo seveki enye kwi-trial yeSan Sebastián, eyamkela.
Antoine Griezmann Ibali lobomi
Ngenxa yokuphumelela kwakhe okuphindaphindiweyo, u-Antoine kamva wanikezelwa ngeveki yesibili ehlala kwiqela. Xa bethetha ukuba uya kuba yinkwenkwezi, iqela liye ladibana nabazali bakhe kwaye lanikela ngokusemthethweni u-Antoine inkontileka yolutsha. Abazali bakaGriezmann ekuqaleni babengafuni ukuba unyana wabo aye eSpain. Emva kokuncenga okukhulu, bamvumela ukuba ahambe. Oku kwavela emva kokuqinisekisa ngokuqinisekileyo.
Xa wafika kuqala kwi-Real Sociedad, uGriezmann walala ekhaya le-club yaseFrance eyayiye yamthatha eFrance. Wayeneemali zokukhusela ikhaya lakhe, kodwa wayemncinci ukuba ahlale yedwa. Waye waya esikolweni ngaphesheya komda eBayonne. Uqeqesha ngakumbi emini ekomkhulu lebhulabhu. Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokuba u-Antoine aqaphele ukuba wayevelise kwinkwenkwana encinane kwinkwenkwe eyakhiwe.
Umsebenzi we-Youth Youth Antoine Griezmann
Nangona kunjalo, Kwamthatha ixesha lokungena kwiqela lokuqala le-Real Sociedad. Oku kwavela emva kweminyaka emine inkqubo yolutsha.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Ukuphumelela
Ehlotyeni i2014, uGriezmann wanconywa e-Atletico Madrid. Ngokuchanekileyo ngomhla we-28th kaJulayi 2014, Atletico Madrid wafikelela kwisivumelwano kunye ne-Real Sociedad ngokudluliselwa kweGriezmann, ngenkokhelo ekholelwa ukuba isondele kuye €30 million (£I-24 yezigidi) igatya lokuthengwa.
Wadlula uviwo lwezokwelapha ngaloo mini kwaye wasayina isivumelwano seminyaka emithandathu kwi-29 kaJulayi, i-2014. Wayenguye Umdlali weLa Liga weNyanga NgoJanuwari 2015 naphezu kokubonakala emithathu kwimidlalo emihlanu ye-Atlético. Ngaloo 2015 efanayo, wakhethwa njengomdlali kuphela we-ATM kunye nenye yezinto ezintathu ezihamba phambili kwiqela leNyaka kwizabelo zeLFP kunye noConaldo noLionel Messi. Ukususela ngaloo ndlela, ukunyuka kwakhe ekubuseni kuye kwaba yinto engavamile. Bonke abanye njengoko bethetha imbali.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Ubomi Bentsapho
UTATA: Uyise u-Alain, owayeyiKhansela eKapa, luvela kuAssatian. Le ndlela yayibonakala ngayo igama lakhe laseJalimane.
Abazali bakaAntoine Griezmann-Alain no-Isabelle
UMAMA: Unina u-Isabelle (okuchazwe ngasentla) wayefudula ehlambulula isibhedlele. Uvela kwenzalo yasePhuthukezi njengoko kuchaziwe ngaphambili. Uyise u-Amaro Lopes wayengumdlali webhola lePortugal kwiFlac Paços de Ferreira.
U-Amaro Lopes waya eFransi nomkakhe uKarolina ukuba basebenze ekwakhiweni kwi-1957. EFransi, unina ka-Antione u-Isabelle wazalelwa. Uyise wakhe wafa xa umzukulu wakhe engumntwana. Njengomntwana, uGriezmann wayehlala echitha iiholide zakhe ePaços de Ferreira. Le yileye wayithatha ibhola. njengomsebenzi.
USISI: Igama lonina likaAntione Griezmann nguMaude. Wayeyindoda yokungqingwa kwetheyibhile yaseBataclan ekuhlaselweni kukaNovemba 2015 eParis, eyenzekayo njengoko wayedlala neJamani eStade de France. Okwangoku, ngoku ungumphathi wamalungelo omfanekiso.
UBHUTI: U-Antione unomzalwana omncinane ogama linguTheo. U-Theo naye ungumdlali webhola lebhola ekhatywayo yasePutukezi ye-Sporting Macon (Njengokuba ngexesha lokubhala).
Omnye uAntoine Griezmann kunye nomntakwabo-Theo
UTheo waba mde. Oku bubungqina bokuba u-Antione wayenenkxalabo yokukhula njengomntwana. Yingakho wayekade enqatshelwe yinkonzo yolutsha.
UAntoine Griezmann kunye nomzalwana
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Ulwalamano lobomi
NgoJuni, i-2017, u-Antoine watshata nomhlobo wakhe othabatha ixesha elide uErika Choperena. Babenento abantu abayibiza ngokuthi 'Imfihlo Yomtshato'. Kuphela abahlobo bakhe kunye nosapho bamenyiwe. Ummangaleli nomfazi wakhe omtsha babamba amajelo ngamabonakude xa bekhulula umfanekiso wabo womtshato.
Wachaza umfanekiso we-Instagram ujabule: "Un camino lleno de felicidad", eliguqulela ngokubanzi 'Umendo ozele uvuyo'.
UAntoine Griezmann Weds Erika
Kwabanye, benze izithembiso ezininzi ezintle. Ukuba wayeyifowuni, ngokwenene, u-Antoine angathanda ukuba yileja. Wonke umntu wayesazi ukuba baya kugqiba ukutshata. Oku kwenzeka.
U-Antoine Griezmann Udaba Luthando no-Erika
UGriezmann nomkakhe ngaphambi komtshato babenomntwana omnye kunye. Intombi abayibamba nguMia Griezmann. Ngokufanelekileyo, u-Antoine uphila ubomi bodwa kwaye akayithandi ukuba ubuso bakhe bentombi buvelele kwiimidiya.
UAntoine Griezmann Intombi- Mia
UAntoine Griezmann wafumana i-£ 520 kakuhle kunye nesilumkiso ... ngokubhiyozela umzukulwana wakhe wokuzalwa emva kokungena. Emva kokungena kwicala lika 3-0 ukunqoba phezu kweValencia, wakha wachaza i-t-shirt ngesigidimi esibhaliweyo ngomkakhe: "UFeliz Cumple Gordita", okanye "Uvuyo lokuzalwa lweChubby".
Ngoxa u-Erika wayenomdla obonakalisa uthando oluvela kuGriezmann, i-FA yaseSpain ayifumanga loo nto. Wakhawula ngokukhawuleza loo nto waza waqhubeka ebhiyozela uthando lobomi bakhe ngendlela yakhe.
UAntoine Griezmann noLuthando loBomi bakhe
Nangona kunjalo, u-Antoine usebenza ulwalamano olunyanisekileyo olunjalo URobert Lewandowski, URoberto Firmino kwaye Juan Mata.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:Inwele Yenwele kunye neTattoo Facts
Nangona, i-Griezmann i-hackyle edibeneyo inika ingcamango yokuba uyabonakalisa kakhulu kwaye unomdla wokuphila.
Umboniso wakhe unika ingcamango eyahlukileyo. Indoda yesiFrentshi inamanani amaninzi anxulumene nenkolo.
Ingalo yakhe engaphezulu inomfanekiso kaYesu ngelixa ingalo yakhe engaphantsi ibonisa i rosari ngamafu kunye neenkwenkwezi.
Abaqalayo babazali bakhe banamathandwe kuye. UAntoine akayena umntu obeka umzimba wakhe ngaphandle kwesizathu. Unqulo olunzulu kakhulu kwaye amathambo akhe anobungqina bento yonke.
U-Antoine Griezmann Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts:I-Ban Bankulu
U-Antoine Griezmann unqunyanyisiwe ukuba amele iqela lesizwe lesiFrentshi kwinqanaba elingaphezulu konyaka.
Isenzo sasixhomekeke kwisiganeko apho uGriezmann kunye nabanye beqela lakhe labalingana befunyenwe ukuba babekho kwi-nightclub yaseParis xa bekufuneka babe nabo bonke abadlali kwiziko lokuqeqesha enyakatho yelizwe.
I-Corentin Tolisso Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali likaBlaise Matuidi Ibantwana labantwana abangabonakaliyo